Precision Sheeter Vagadziri & Vatengesi - China Precision Sheeter Fekitori
1.19 ″ yekubata skrini yekudzivirira anoshandiswa kumisikidza uye kuratidza saizi saizi, kuverenga, kucheka kumhanya, kuendesa kunowirirana, nezvimwe. Iyo yekubata skrini yekudzivirira inoshanda pamwe chete neNokia Siemens.
2. Maseti matatu ekucheka mhando yekucheka unit kuti ive nekumhanya, kumeso uye isina simba kugera nekucheka, nekukurumidza kugadzirisa uye kukiya. Yakakwira kuomarara banga mubati inokodzera 300m / min kumhanya kutsvedza.
3. Rokumusoro banga rinotenderera rine nzira yekuBritish yekucheka zvinobudirira kudzora mutoro uye ruzha panguva yekucheka mapepa, uye kuwedzera hupenyu hweanocheka. Iyo yepamusoro banga roller yakasungwa nesimbi isina simbi yekugadzirisa zvakakwana, uye inesimba zvine simba panguva yekumhanya-mhanya. Chigadziko chezasi chishandiso chakagadzirwa nesimbi yakakandwa pamwe chete yakaumbwa uye yakakandirwa, uyezve kunyatsogadziriswa, nekugadzikana kwakanaka.